तपाईलाई बुढ्यौलीतिर धकेलिरहेका पाँच खराब बानी! – Nepal Press
तपाईलाई बुढ्यौलीतिर धकेलिरहेका पाँच खराब बानी!
२०७८ मंसिर १० गते १०:४७
काठमाडौं । प्रत्येक मानिसका शरीरलाई हानी पुर्‍याउने केही न केही खराब बानीहरू हुन्छन् । त्यस्ता केही खराब बानीले हाम्रो स्वास्थ्यसँगै ‘एजिङ प्रोसेस’लाई पनि छिटो बनाइदिन्छन् । यदि हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान पुर्‍याउने हो भने एजिङ प्रोसेसलाई सुस्त बनाउन छिटै हुने बुढापाबाट जोगिन सकिन्छ ।
पब्लिक हेल्थ न्यू मेक्सिको स्टेट युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डा. जगदिश खुबचन्दानीले आम मानिसमा हुने पाँच खराब बानीको बारेमा बताएका छन्, जसले चाँडै बुढापा निम्त्याउँछन् ।
तनाव: कुनै पनि कुरालाई लिएर धेरै चिन्ता लिने मानिस छिट्टै बुढो हुने विज्ञले बताएका छन् । अनावश्यक धेरै चिन्ता दिमागी वा शारिरीक बिरामीको कारणसमेत बन्न सक्ने डा. जगदिशको भनाई छ । त्यसैले लामो समयसम्म जवान रहन चाहनुहुन्छ भने तनाव लिन छाडिदिनुहोस् ।
अनिदो: पर्‍यात निन्द्रा नपुर्‍याउनु पनि एक ठूलो समस्या हो । र, यसको सम्बन्ध तनावसँग पनि हुन्छ । पर्‍याप्त निन्द्राले हामीलाई तनावमुक्त रहन मद्दत गर्छ । र, यसले एजिङ प्रोसेसलाई पनि सुस्त गराउँछ । यद्यपि, धेरै मानिसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । युवाहरूमा यो समस्या अझ विकराल देखिन्छ, जसो असर भविष्यमा पर्न सक्छ ।
खराब डाइट: तीव्र गतिमा उमेर बढ्नु वा बुढो हुँदै जानुमा खराब डाइट पनि ठूलो कारण हो । डा. जगदिशका अनुसार सोडा, प्रोसेस्ड फुड र फ्याटी खानेकुराहरू हाम्रो आहारको हिस्सा बनेका छन्, जो तीव्र एजिङ प्रोसेसका कारक बन्छन् ।
एक्टिभ नहुनु: व्यायाम नगर्नु र दैनिक जीवनचर्यामा पनि शरीरलाई छरितो नबनाउनुको असर सोझै हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्छ । यसबाट युवा पुस्ता झनै ग्रसित छ । विज्ञ मानिस एक्टिभ नहुँदा चाँडै रोगले आक्रमण गर्ने र बुढापा पनि तीव्र गतिमा बढ्ने बताउँछन् ।
धुम्रपान/मद्यपान: तनाव र एन्जाइटीबाट बच्न धेरैले अल्कोहल, तम्बाकु वा ड्रग्सको सहारा लिएका हुन्छन् । यसको प्रयोग युवा पुस्तामा झनै बढ्दो छ ।
यसको धेरै प्रयोगबाट मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ । तर, त्यसअघि यसको लगातार प्रयोगबाट मानिस छिटै बुढो हुन थाल्छ । यसले दिमागी र शारिरीक समस्या बढाउँदै मानिसको एजिङ प्रोसेसलाई अझै तीव्र बनाउँछ ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १० गते १०:४७
स्पेनमा आमाबाबुसँग छुट्टिएर बस्नेलाई अनुदान
७७ वर्षीय वृद्धसँगको प्रेममा २० वर्षे युवती : डेटिङ एपबाट सुरु भएको चिनजान बिहेसम्म !
महिलाको सौन्दर्य बढाउन जहाँ गालामा ५० थप्पड हानिन्छ !
नेमेवीको भाइरल पप गीत ‘फ्रजाइल’माथि चीनले लगायो प्रतिबन्ध
१८ वर्षीया छोरीसँग भाडा लिने आमालाई गाल‍ीको ओइरो
अमेरिकी गायिकाको घिनलाग्दो हर्कतः स्टेजमै फ्यानमाथि मुत्रविसर्जन !
टिकटकमा ‘परफेक्ट’ जोडी: सम्बन्ध टुट्न लागेपछि श्रीमतीको हत्या
साउदी अरव : कोठामा छटपटाइरहेका श्रमिकको उपचार र उद्धार प्रयास
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, राधिका शाक्य पनि संक्रमित